SAWIRRO Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'SAWIRRO'
SAWIRRO – Qaraxii ka Dhacay Hotel Weheliye
Ciidamada Nabadsugida ee (NISA) ayaa illaa hadda ku mashquulsan gaariga qarxay nooca uu yahay, marka laga soo tago inuu ahaa gaari yar oo nooca raaxada ah, maadaama gaariga uu bur buray, lana waayay raad lagu ogaado nooca gaarigaasi uu ahaa.
SAWIRRO – Booqashadii Farmaajo ee Sacuudiga
Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa weli booqasho rasmi ah ugu sugan dalka Sacuudi Carabiya , waxaana maanta lagu wadaa isaga iyo tiimkiisa inay cumreystaan, kahor inta aanu booqan Magaalada Madiina Al-munawara oo uu ku yaallo Qabriga Nabigeena Muxamad (NNKH).
SAWIRRO – Farmaajo iyo Furaha Madaxtooyada
Mas’uuliyiintii maanta goobjooga ka ahaa xafladda xil wareejinta ayaa waxaa kamid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari gudoomiyaha aqlka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi guddomiyaha maxakamadda, xeer ilaaliyaha qaranka,hantidhowraha ,xildhibaano iyo wasiiro waxaana ay ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Muqdisho,waxaana munasabadaasi xilka kula wareegay madaxweyne Farmaajo.
SAWIRRO – Weerarkii Al Shabaab ee Kulbiyow
Weerarkan ay Shabaab ku qaadeen Deegaanka Kulbiyoow ayaa waxa ay ku dileen sida ay sheegeen 67-askari oo ka tirsanaa Ciidanka dalka Kenya, waxaana weerarkan fuliyay Koox katirsan Shabaabka oo loo yaqaan Katiibada Saalix Nabhaan
SAWIRRO – Qaraxii Maqaayada The Village
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa sida la sheegay wuxuu ahaa Bartilmaameedkiisa Taliyaha Qaybta Booliska Waliyow Cadde Maxamed Daahir Cabdulle oo gaarigiisa marayay xilliga qaraxa uu dhacaayay wadadaasi.
SAWIRRO – Howl Galkii Ciidamada NISA
Howlgalka intii uu socday ayaa ciidamada waxa ay baarayeen Guryaha xaafado kuyaala labada Degmo ee Waabari iyo Xamar Jajab, waxaana ay sidoo kale ciidamada baarayeen Gaadiidka iyo Mooto bajaajta isticmaalayay wadooyinka xaafadaha howlgalka uu ka socday.
SAWIRRO – Dhalinyaro Somali Lagu Dilay Sweden
Dhalinyarada la dilay ayaa fadhiyay goob maqaayad ah oo lagu caweeyo, halkaasi oo ka mid ah goobaha dadka Soomaalida ah ee degan magaalada Stockholm ay isugu yimaadaan.
SAWIRRO – Al Jazeera ka Soo Qaaday Shabaab
Taleefishinka Al-Jazeera oo ka mid ah warbaahinta ugu caansan dunida Carabta, ayaa soo bandhigay sawirro wariye ka tirsan uu kasoo qaaday xero ay ku tababartaan ciidamada Al-Shabaab oo aan la shaacin goobta ay ku taallo.
SAWIRRO – Magaalada Gaakacyo Dagaal Kadib
Ciidamada Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa weli isku horfadhiya deegaanada galbeedka magaalada Gaalkacyo, waxaana laga cabsi qabaa in ay mar kale ay isku dhacaan ciidamadaasi, oo isku soo uruursaday hub aad u culs.
SAWIRRO – Galmudug oo soo Bandhigtay Duqayn..
Guddoomiyaha waxa uu sheegay Diyaarado dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ee Saldhiga ku leh Garoonka C/laahi Yuusuf ee Magaalada Gaalkacyo inay duqeyn ku asqeeyeen labo gaari oo ay saarnaayeen ciidamada Maamulka Galmudug oo ku sugnaa Deegaanka Jeexdin.